Fanohanana mpamily :: Voakiana ny fandaminana napetraky ny kaominina Antananarivo renivohitra • AoRaha
Fanohanana mpamily Voakiana ny fandaminana napetraky ny kaominina Antananarivo renivohitra
Ny fandaminana nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra no voalaza fa nahatonga ny fikorontanan’ny fizarana ny fanomezana ho an’ireo mpitondra fiarakaretsaka. Nitoroka ny fikorontanana niseho ny Fikambanan’ny taksy eto Antananarivo renivohitra (FTAR), omaly. Nambaran’ny filohan’ny Ftar, Rahanirina Clémence fa tsy ny lisitra tany amin’izy ireo no nampiasaina fa taratasy mirakitra anaran’ireo mpamily hafa, izay nahatonga ny tsy fahatomombanana.
« Nambaran’ny tao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra fa andefasana hafatra ireo mpamily tokony hahazo fanampiana. Misy amin’ izy ireo nefa no nahazo hafatra indroa sy intelo misesy isan’andro fa afaka maka ny fanampiana sahaza azy. Ao indray no tsy nahazo mihitsy. Etsy an-kilany, nakan’ izy ireo solontena iray isaky toby fiantsonana dia nanjary tsy nahazo ny ambiny », hoy hatrany Raharinirina Clémence. Milaza ho voailika ry zareo.
Telonjato mahery ny isan’ny fiantsonan’ny fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Miisa dimy arivo latsaka kosa ireo mpitondra fiara mivondrona ao amin’ny Ftar. An’ arivony anefa ireo miandry hahazo hafatra momba ny anjara fanampiany. Na izany aza, tonga marobe teny amin’ny Parvis Analakely avokoa ny ankamaroan’ireo mpamily fiarakaretsaka, omaly.
Nitohy toy ny tamin’ny afak’omaly ny fivorivorian’ireo mpamily teny an-toerana.
Nohamafisin’ny avy ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra indray fa hitohy ny fanomezana an’ireo fanampiana ho an’ny mpamily fiarakaretsaka ka hahazo avokoa ireo izay voasoratra anarana.
Manodidina ny dimanjato hatramin’ny arivo isan’andro ireo hisitraka izany.
Fepetra noho ny hamehana :: Miato avokoa ny fampiharana an’ireo didin’ny HCC
Fampitandreman’ny holafitry ny mpitsabo :: Ireo voan’ny « Covid-19 » ihany no tokony hihinana fanafody simika